बालेनको वाचालाई समेत त्यसै अविश्वास गरेका रहेनछन् सिसडोलबासीले, बालेनले पठाएको नास्टको वैज्ञानिक टोलीले निकाले यस्तो डरलाग्दो निष्कर्ष ! – Annapurna Post News
June 8, 2022 sujaLeaveaComment on बालेनको वाचालाई समेत त्यसै अविश्वास गरेका रहेनछन् सिसडोलबासीले, बालेनले पठाएको नास्टको वैज्ञानिक टोलीले निकाले यस्तो डरलाग्दो निष्कर्ष !
काठमाडौं । काठमाडौंको फोहोरले सिसडोल दुर्गन्धित मात्र भएको छैन् हरेक बर्ष दुषित पानीका कारण लाग्ने रोगका कारण यहाँका धेरैले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । काठमाडौं महानगरमा नयाँ जनप्रतिनिधी आएसँगै यहाँको समस्या समाधान हुनेमा अझै आशावादी बनेका छैनन् यहाँका बासिन्दा कारण हो अहिलेसम्म धोकाधडी र आश्वासनमात्रै पाउनु ।
यसैबीच, काठमाडौं महानगरले सिसडोलमा पठाएको वैज्ञानिक टोलीले डरलाग्दो निष्कर्ष निकालेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको नुवाकोटस्थित सिसडोल ल्यान्डफिल साइट वरपरको पानी पनि प्रदूषित भएको पाइएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्टका डा रविन्द्र ढकाल, डा टिस्टा प्रसाई जोशी, डा सौरभ भट्टराई, अनिता पन्थी र सुनिता श्रेष्ठसहितको विज्ञ टोलीले गरेको अध्ययनमा फोहोरको लिच्चडका कारण पानीसमेत प्रदूषित भएको पाइएको हो ।
सिसडोलबाट संकलित तीन वटा नमुनाको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पानीमा प्रशस्त मात्रामा लिच्चड मिसिएको देखिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले जानकारी दिएका छन् । ‘स्रोतबाट १ किलोमिटर परसम्मको पानीमा पनि प्रदूषणको मात्रा उच्च देखिएको छ ।
यसबाट सो स्थानमा जल सम्बद्ध जीवजन्तुमा नकारात्मक असर परेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ,’ शाहले फेसबुकमा लेखेका छन् । विज्ञ टोलीले यो अवस्थालाई सकेसम्म चाँडो नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताएको छ ।
डा. भटराई पुत्री मानुषीविरुद्ध रञ्जुको उम्मेदवारी घोषणा, एमालेका वरिष्ठलाई झड्का